Maxay tahay in la ogaado marka la xareynayo - Amjambo Africa
Diiwaangelinta canshuuraha way ku adkaan kartaa qof kasta oo Mareykanka ku nool, laakiin magangalyo-doonka, muhaajiriinta, iyo qaxootiga ayaa laga yaabaa inay waayo-aragnimadan si gaar ah ugu adkaato. Inta badan magangalyo-doonka, soo-galootiga, iyo qaxootiga waxaa lagu sifeeyaa inay yihiin \_”ajaanib deganeyaal ah\_” waxaana looga baahan yahay inay bixiyaan xaddiga canshuurta la mid ah tan muwaadiniinta Mareykanka ee ku dhalatay Mareykanka Si kastaba ha noqotee, maxaa yeelay waxaa jira waxyaabo ka reeban sharcigan – iyo sababta oo ah inta badan talooyinka xareynta canshuuraha kuma xirna muhaajiriinta – Barwaaqada ‘MeE’ waxay la wadaageysaa tilmaamahan guud si ay u caawiyaan. Akhristayaasha Amjambo Africa waxay sifiican u fahmayaan waajibaadka canshuuraha iyo inay ogaadaan goorta iyo meesha laga helo caawimaad.
1. Bixinta canshuuraha ama buuxinta canshuur celinta
waqtigeeda waa qasab. Ku guuldareysiga inaad sidaas sameyso waxay leedahay cawaaqib aad u daran. Canshuuraha aan la bixinin waxay saameyn ku yeelan karaan xaalada socdaalka ee xarkaha. Taariikhda xareynta waa Abriil 15, 2021.
2. “Shisheeyaha degganeyaasha\_” iyo \_”shisheeyaha aan waddanka degganeyn\_” waxay leeyihiin culeysyo canshuur oo kala duwan marka loo eego sharciga Mareykanka. “Shisheeyeyaasha degganeyaasha\_” waa la canshuurayaa isla heerka muwaadiniinta Mareykanka. Shisheeyaha degan waxaa ka mid ah
a. Kuwa haysta kaarka cagaaran iyo deganayaasha joogtada ah ee xalaasha ah
b. Shakhsiyaadka ka gudba “imtixaanka joogitaanka ee la taaban karo.”
Tani way dhib badan tahay, laakiin guud ahaan, qof kasta oo ku noolaa Mareykanka in ka badan 31 maalmood sannadka hadda socda, iyo wadar ahaan 183 maalmood ama ka badan intii lagu jiray labadii sano ee la soo dhaafay, wuu ka gudbayaa tijaabadan oo waa canshuur ahaan waqtigaas. Noocyada fiisooyinka qaarkood ayaa laga dhaafay “imtixaanka joogitaanka ee la taaban karo.” Ali “Shisheeyeyaasha aan dalka degganeyn” waxaa si ka duwan u maareeya IRS waxayna mas’uul ka yihiin oo keliya dakhliga laga helo Mareykanka.
3. Dhammaan dakhliga soo galay sanadkii kalandarka hore waa in lagu soo wargeliyaa canshuur celinta. Dakhliga laga helo dal aan Mareykanka aheyn waxaa lagu goyn karaa deyn canshuur shisheeye, duruufaha qaarkood awgood.
4. Ku-tiirsane kasta oo la sheegto cashuur-celin waa inuu u-qalmaa deganeyaasha Mareykanka, cashuur-bixiyuhuna waa inuu noqdaa waalid ama ilaaliye sharci u ah carruur kasta oo lagu sheegto ku tiirsane. Canshuur bixiyeyaashu ma dalban karaan xaas ama caruur dibada ku nool canshuur celin.
“Tijaabada ku tiirsan” waxay ka caawin kartaa dabiilaha go’aaminta haddii ilmuhu u qalmo iyo in kale.
Ilmuhu wuu u qalmaa Waa inuu xubin ka yahay qoyskaaga. Waa inuu lahaadaa isla degenaanshaha in kabadan sanadka badhkiis. Waa inuu ka yar yahay da’da 19, ama ka yar 24 iyo arday waqti buuxa ah ugu yaraan 5 bilood. Waxay noqon karaan da ‘kasta haddii ay si joogto ah u naafoobaan. Ma bixin karo in ka badan kalabar taageeradooda. Ilmuhu ma xarayn karo soo celin wadajir ah sanadka.
5. Diiwaangeli cashuuraha sida ugu dhakhsaha badan. Loo shaqeeyayaasha badankood waxay soo diri doonaan foomamka W-2 ama 1099 bartamaha Janaayo. Milkiileyaasha ganacsiyada yaryar waa inay isku dheelitiraan buugaagtooda gudaha oo ay soo ururiyaan dhammaan rasiidhada kharashka ee laga soo qaatay sanadkii hore illaa waqtigaas.
6. Iska ilaali khayaanada. IRS ma sameyso wicitaano taleefan shaqsiyadeed, ma u dirto emayl, ama qoraallo canshuur bixiyaasha.
7. Ka fogow lacag bixinta badan si aad u xareeyso. Inta badan canshuur celinta waa fududahay oo boqolaal doollar kuma bixinayso diyaarinta. Soogalooti badan ayaa u qalma diyaarinta canshuurta bilaashka ah iyada oo loo marayo barnaamijka CA$H. Isdiiwaangalinta balanta laanta deegaanka ee CA$H Maine waxay badbaadin kartaa canshuur bixiyeyaasha dakhligoodu hooseeyo waqti badan iyo lacag badan. Kuwa su’aalaha qaba waxay gaari karaan BarwaaqadaME si ay uhelaan kheyraad ka caawiya arrimaha la xiriira canshuuraha.
PreviousXafiiska u diyaar garowga Canshuuraha Fursadaha Dhaqaalaha bilaash ah
NextCPort Isu abaabulka iyo xareynta